Falanqeynta Champions League Group G: Benfica iyo Barca Oo Portugal Ku Baratamaya. - jornalizem
Falanqeynta Champions League Group G: Benfica iyo Barca Oo Portugal Ku Baratamaya.
Barcelona ayaa rajeyneysa inay guusheedii ay ku bilaabatay Champions League Group G halkeeda ka sii wadato marka ay caawa Portugal kula ciyaarayaan kooxda Benfica.
Kooxda reer Spain oo gaartay semi-finalka koobkaan shan xilli ciyaareed oo isku xigta, oo mudadaas ay labo jeer koobka kor u qaadeen, ayaa rajeyneysa inay guulahooda halkaas ka sii wataan marka ay caawa Estadio do Sport Lisboa e Benfica ku ciyaaraan.
Barcelona ayaa si aad u fiican ku bilaabatay koobka horyaalka dalkeeda iyo kan qaarada yurub, iyagoo badiyay lix kulan oo ilaa iyo haatan la ciyaaray La Liga, halka ay sidoo kale Champions League kulankii ugu horeysay 3-2 ku garaacay kooxda Spartak Moscow.
Guushaas ayaa waxa ay aheyd tii ugu horeysay oo seddex kulan oo Barcelona ay goolal muhim ah dhaliso daqiiqada 80aad ama wixii ka danbeeya, iyagoo haatan bartay sida loo dagaalamo ilaa iyo daqiiqada ugu danbeysa si ay u helaan seddex dhibcood.
Si kastaba Benfica ayaa iyadana leh dabcigaas aan la quusaneynin ilaa daqiiqada ugu danbeysa, waxaana ay hogaanka u hayaan horyaalka dalkooda.
Waxa ay u baahnaan doonaanse inay howl karnimo la soo baxaan, hadii ay doonayaan inay garacaan Barcelona oo dhawaanahan ka dhigatay Champions League sida inuu yahay tartankooda.
LINE-UPKA MACQUULKA AHBENFICA
Dhanka kale Spartak Moscow ayaa diyaar u ah inay wax ku hesho qaab ciyaareedkii qatarta ahaa ee kala hortagtay kooxda Barcelona bishii hore, waxaana ay garoonkooda Olympic Stadium ee caasimada Russia ku martigelin doonaan kooxda Celtic.
Kooxda uu macalinka u yahay Unai Emery ayaa ayaa hogaanka u hayay ciyaartii Camp Nou ciyaarta oo dhiman wax ka yar 20 daqiiqo, kaliya labo gool uu dhaliyay Lionel Messi ayaa qalbiga ka jabisay Spartak Moscow.
Seddex guul oo mar kaas ka dib ay gaareen kooxda reer Russia ayaa ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan, si kastaba tababare Emery ayaa ka walwalsan in kooxdiisa ay shabaqa gool ka ilaashan weysay 12kii kulan ee u danbeysay.
Dhanka Celtic oo badisay seddex kulan oo ka mid ah 4tii kulan ee ugu danbeysay oo kulanka kaliya aysan badinin ay aheyd kulankii Benfica ee Champions League oo barbaro ay la galeen ayaa iyadana rajeyneysa inay guul gaarto markii ugu horeysay Group G.
Benfica v Barcelona – Waqtiga 9:45 p.m xilliga Soomaaliya
Spartak Moskva v Celtic – Waqtiga 7da fiidnimo xilliga Soomaaliya.